Sir la ogaaday: Maxaa ka jira in ciyaartoy uu Bale ugu horreeyo ay sabab u noqdaan in Zidane uu iska casilo shaqadii Real Madrid! - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Sir la ogaaday: Maxaa ka jira in ciyaartoy uu Bale ugu horreeyo ay sabab u noqdaan in Zidane uu iska casilo shaqadii Real Madrid!
Macallinka shaqa la’aanta ah hadda ee Zinedine Zidane ayaa iska casilay Real Madrid billoyin ka hor, waxaana la ogaaday in Gareth Bale uu fure u ahaa dhacdadaas.
Ninka Faransiiska ah ayaa ka yaabiyay dunida kubadda cagta markii uu isk casilay shaqadii Los Blancos xilli maalmo uun laga joogay markii uu gacan geliyay tartanka Champions League xillli ciyaareedkii saddexaad oo xiriir ah.
Ciyaartii Finalka ee ay Liverpool kula ciyaareen Kiev ayaa uu Bale dhaliyay laba gool oo ka saacidda Madrid inay noqoto horyaalka Europe, goolashaas ayaana dhaliyay in Florentino Perez iyo Zidane ay isku qilaafaan mustaqbalka xiddiggii hore ee Tottenham.
Warsidaha laga qaddariyo Spain ee El Pais ayaa shaaciyay in madaxweynaha Real Madrid uu ka laabtay qorshahii ahaa in Bale la iibiyo xagaaga marka uu furmo suuqa kala iibsiga, taasna waxa ay hor istaagtay Zidane oo dhammaadka xilli ciyaareedkii hore u ole’oleynayay inuu diro weeraryahanka lugta bidix ku xamaasha.
Iyadoo uu xaal sidaas yahay, Perez ayaa sidoo kale tilmaamay in Bale uu ka wanaagsanyahay Cristiano Ronaldo, waxaana durba digtoonaan galay Macallinkii hore ee Real Madrid.
Captain-kii France ku hooggaamiyay ku guuleysiga Koobka Adduunka 1998 ayaa damacsanaa in laacibka reer Wales uu iibiyo si beddelkiisa uu usoo qaato Mohamed Salah, Eden Hazard ama Harry Kane, sidaasna waa ay isku raaceen isaga iyo Perez ka hor inta uusan qaalmo rogad dhalinin Bale ciyaartii Finalka.